Ukuphupha koMntu Discover Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
"Abantu" ngabo bonke abantu ababonakala kuthi emaphupheni, nokuba zikhona nyani okanye ziingcinga ezintle esizenzileyo kwilizwe lethu lamaphupha. Njengezilwanyana okanye izinto, imihlaba kunye neziganeko zemozulu, abantu banophawu lwabo ekutolikeni amaphupha.
Sisoloko siphupha umntu othile okanye abantu abaliqela esibaziyo, mhlawumbi sitshintsha ubuso okanye sibabeke kubudlelwane obahlukileyo kuthi. Ke umphathi unokuthi ngesiquphe abe ngumthandi, udade abe ngutitshala wethu eyunivesithi, okanye ummelwane abe ngumzalwana.
Iinkcukacha ziluncedo kakhulu ekutolikeni amaphupha. Kuba ngokuxhomekeke kwimeko umntu abonakala phantsi kwayo, indlela anxibe ngayo okanye into abayithethayo, iphupha elo linokuchazwa ngendlela eyahluke mpela. Ukukhumbula ngcono iinkcukacha kunye nokukwazi ukuhlalutya iphupha, eyona nto iya kuba kukugcina idayari yamaphupha. Ngale ndlela, ungasoloko ujonga amanqaku akho ngaphandle kokulibala nantoni na.
Ngoku, lithetha ntoni iphupha lomntu? Ekuqaleni kwentsebenzo, singathanda ukuchaza iimeko zephupha ezinamava rhoqo, emva koko sidlulele kwinxalenye ngokubanzi. Abaphuphi abanokukhumbula ngokungacacanga imvakalelo xa belele okanye indawo emnyama baya kuyifumana le nto bayifunayo apha.
1 Uphawu lwephupha «umntu»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukujonga: umntu unyamalele ephupheni!
1.2 Umntu omthandayo. Uthando lwam kwihlabathi lamaphupha
2 Uphawu lwephupha «umntu» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «umntu» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «umntu» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «umntu»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukujonga: umntu unyamalele ephupheni!
Abo bafuna umntu on el mundo Amaphupha ahlala ehlangabezana nezithintelo ezithile endleleni yawo. Olu luphawu lwemiceli mngeni umntu ophuphayo ekufuneka ajongane nayo kwihlabathi elivukayo. Indlela yokulala yokoyisa iibhloko zokulala ibonelela ngolwazi oluxabisekileyo malunga nendlela yokujongana neminqweno kunye neengxaki zokwenene.
Ukuba umntu uyamthanda umntu amfuna ngokungazenzisiyo, umntu olalayo uya kulangazelela ubudlelwane obonelisayo. Nangona kunjalo, ukuba sele enxulumene, banokuba sele behlukanisile.
Umntu omthandayo. Uthando lwam kwihlabathi lamaphupha
Umntu othandekayo ovela ephupheni unokubonisa indlela ekubaluleke ngayo oku kubomi bokwenene ephupheni. Abo basandula ukuthandana banamava amaphupha anjalo ekuqaleni. Abalali bakwimeko enzima kwihlabathi eliphaphamayo banamava abo babathandayo kwimicimbi yamaphupha rhoqo njengoko benqwenela ingcebiso elungileyo. Kwangokunjalo, umntu omthandayo angamela inxenye yobuntu bakhe okanye inqanaba lobomi. Umntu ekubhekiswa kuye usenokungavisisani naye kwaye azive onwabile.
Uphawu lwephupha «umntu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, ukubonakala kwabantu ephupheni kuthetha ngento yokuba ukuphupha kuninzi kuluntu abanye abantu kufuneka bakhangele. Mhlawumbi ungoyena ndoqo wokuzihlukanisa kwaye, ngokungathi kunjalo, uphupha ubudlelane nabanye. Iphupha ke linje isilumkiso Ukuqonda ukuba ungarhoxi ngokupheleleyo, kodwa ukufuna ukunxibelelana nabantu ngakumbi.
Kwakhona, umntu ephupheni uhlala enje Umhlaba wokuqikelela. Uphupha wena okanye iinxalenye zobuntu bakho ubanika uhlobo lomntu ephupheni kwaye mhlawumbi unxibelelana nabo.
Abasemzini bamele Iindawo zobuntuOlo phupha aluboni okanye lucinezele, ngelixa abantu oqhelene nabo bahlala bebonisa iinxalenye ezaziwa ngumntu ophuphayo ngaye kwaye zihlala kuye ngalo mzuzu. Ukuba imalunga nabantu abathile, iphupha eli lihlala lithetha into malunga nobudlelwane bephupha nalo mntu.
Ukuba umntu odibana naye kwihlabathi lamaphupha unqulo ngokukodwa, ke ngokomfuziselo bamele igunya lokuvuka ebomini. Isenokuba ngutitshala, ugqirha, igqwetha, okanye ipolisa. Ungomntu ophuphayo amhloniphayo, kwaye ngegunya lakhe angaze alithandabuze. Ngokuchasene noku, umntu ongenazo izakhono zokuphupha, wenza kakubi okanye athethe into engekhoyo ubonakalisa inkxalabo ngaye. imposiso baqondwa ephupheni; ezi zifuna ukulungiswa okanye ukuphuculwa ngokwenyani.
Umntu oqhele ukubonwa njengongendawo, ongathandekiyo ufuzisela iipropathi zephupha, angazithandiyo kuye okanye ukuba uzama ukucinezela. Nangona kunjalo, ukuba omnye umntu ubonakala emhle kwaye enomtsalane ephupheni, umntu oleleyo unokulindela impumelelo: kokubini ngengqondo yobungcali neyangasese.
Olunye utoliko olunokwenzeka lubangelwa luhlobo lomntu:
Umdala: unokufuzisela ootatomkhulu noomakhulu okanye izinyanya kwaye, ke ngoko, ulwazi olunamandla okanye igunya; ukuba abantu abadala abaninzi bavela emaphupheni, baquka amasiko kunye nemithetho
Umntu onegunya: kuxhomekeke kwindlela elenziwe ngayo iphupha, uziva ukuba igunya sisikhokelo esiluncedo okanye esoyikisayo; Ephupheni inokumela i-superego kwaye ibonise into elungileyo ephupheni.
Umntwana: umele ukuba semngciphekweni kunye nokuba msulwa
Udumo: kubonisa iipropathi kunye neetalente ezingasekelwanga ukuba umntu ophuphayo kufuneka azisebenzise
Uzwilakhe - uzwilakhe okanye umntu ongathandekiyo ephupheni ubukhulu becala ubonakalisa igunya labazali, iphupha lijongana notata wakhe
Abazali: inokuchazwa zombini ngokubhekisele kubudlelwane bephupha nabazali balo, kunye nokubonisa iimvakalelo zomzali okanye zoomama
Umfazi: xa ivela kumaphupha omfazi, ibonisa imiba yobuntu bakhe; ephupheni lomntu malunga neemvakalelo zakhe / intuition okanye malunga neqabane lakhe
Bazalwana: banokumela i-ego eguqukayo, Oko kukuthi, icala lobuntu elingaziwa, okanye iimpawu ezifunwa ngumphuphi, kodwa angahlali.
Uthixo okanye uthixokazi -Umela amandla angenakuthintelwa, imfihlakalo kunye nokuqonda.
IHero / iHorhero: Imela umlo ngokuchasene neempembelelo ezimbi, umntu ophakamileyo okanye odlala indima ebalulekileyo njengomlingani kumntu ozithiyileyo.
Abafikisayo: Amaphupha abakwishumi elivisayo abonisa iimpawu zabo ezingaphuhliswanga, ukongeza: ukuphupha kujongana necala lolutsha ngokwalo.
Umntwana: Ulonwabo kunye nempumelelo zilindele umntu oleleyo; Ukujongana nobuntwana bakho
Umntwana: ireferensi kumntwana wakho wangaphakathi, amathuba amatsha kunye nomdla
UKumkani okanye uKumkanikazi: umele ubudlelwane notata okanye, kwimeko yokumkanikazi, nonina, inkosi inokumela amaxabiso osapho, ukumkanikazi, igunya labasetyhini ngokubanzi.
Ntombazana: ukuphupha kufuna uqhakamshelwano necala lakhe elimsulwa kunye neemvakalelo
Indoda: iquka iipropathi zokulala, azibona njengendoda, umzekelo, isibindi, amandla, ukucinga ngokufanelekileyo okanye ukungakhathali; Kwiphupha lomfazi, angabonisa ukuba ujongene nolwalamano lwakhe.
Isihlwele: abantu abaninzi endaweni banokuba luphawu lokuba iphupha liziva longanyelwe, kodwa amaxesha amaninzi uphawu lwephupha lukwabonisa ukungqubana nezinto zentlalo.
Abamelwane: Bayayikhusela into ebonakalayo, kuxhomekeka kwindlela abaziphatha ngayo xa belele, kunye nezinto ezinokuthintela okanye ezifanelekileyo zokulala.
Iqabane: ukubonakaliswa kweengxaki zobudlelwane ezingasonjululwanga, kodwa nokunxibelelana neemvakalelo zothando kunye nokwabelana ngesondo kuwe.
I-Pirate: unxibelelwano lweemvakalelo nomphefumlo lusengozini
Umbingeleli-Isikhumbuzo sokuthatha uxanduva ngakumbi ebomini.
Inkosana okanye inkosazana: ukuphupha kunamandla okwenza izigqibo kwaye uyabazi ubuntu bakho
Izalamane: bahlala bebandakanya iinxalenye zabo zobuntu, kokukhona ubudlelwane bukhulu, kokukhona iphupha lepropathi ehambelana nayo lilibalekile
Izinyanya: zimele unyawo kunye neengcambu ngokwazo, ngamanye amaxesha zibonisa kwangaphambili.
IGemini okanye i-doppelganger: ibhekisa kubuninzi kunye nobudlelwane phakathi komntu kunye nehlabathi langaphandle.
Uphawu lwephupha «umntu» - ukutolikwa kwengqondo
Enye ithi ithi ukuphupha kuwo onke amanani kusoloko kuziphupha. Le yinto ekufuneka uyigcine engqondweni xa utolika iphupha apho umntu omnye okanye abangaphezulu badlale indima. Abantu abasephupheni kunye nendlela abaziphatha ngayo banokuxela into malunga nendlela oziva ngayo ngabo ebomini bokuvuka kunye nento oyithandayo ngabo okanye nokuba ayimnandanga kangakanani.
Rhoqo, nangona kunjalo, abantu abaphuphayo banikezela ngemiba yabo ubuntu bakho Kuxhomekeke kwinto eyenzekayo ephupheni, uphawu lwephupha lunokutolikwa ngokwahlukileyo:
Ukuba umntu unobubele kwaye bonwabile kunye, oku kubonisa ukuba bayamkele le nxalenye yobuntu babo kwaye bayifaka kakuhle ebomini babo. Ukuba unengxabano okanye uziva uphethwe kakubi ngolu hlobo silwe Unokuba nenxalenye yesiqu sakho.
Umzekelo woku iya kuba ngumfazi owoyikayo icala lakhe elinoburharha kwaye urhoxe kakhulu. Ephupheni, unokujongana nomntu onzima kakhulu, oziva ucinezelekile ephupheni, kodwa oyena mntu ungowakho kuphela. Ubundlongondlongo iimephu. Endaweni yokulwa izinto ezingathandwayo okanye ezicinezelweyo, kunokuba luncedo ukujongana nazo kwaye uzibuze ukuba kutheni ungazivumeli ukuba ubekho.
Ukuba umi phambi kwakho ephupheni, oku kungabonisa ubunzima ekudibaniseni izichasi ezahlukeneyo zangaphakathi. Ukuba umntu uhlekisa ngabanye abantu kwi-cabaret ephupheni, kunokubonisa ukuba umntu ujonge ubomi kakhulu kwicala elonwabileyo. Ukuba omnye umntu uyakubulisa xa ulele, kufuneka unakekele izicwangciso zakho zekamva.
Uphawu lwephupha «umntu» - ukutolika ngokomoya
Ukuba udibana nabanye abantu ephupheni, bamele ngokwasemoyeni Conocimiento y Ukucinga ngokwakho. Ephupheni unokuhlangana kunye neenkosi zokomoya kwaye ucinge, ngamanye amaxesha uthethe Oonozakuzaku ukusuka kwihlabathi eliphezulu labalinganiswa bephupha.